သတင်း - အသေးစားတူးဖော်ရေးနှင့်ရေပုံးသေးကိုထိန်းသိမ်းရန်
(1) ။ တူးဖော်မသုံးမီ .Preparation
၁။ ဆီ ၃ ခုနှင့်အရည်တစ်ခုအားစစ်ဆေးခြင်း - ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၊ အင်ဂျင်နှင့်ဒီဇယ်ဆီစစ်ဆေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီနှင့်အင်ဂျင်ကိုထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ အအေးသည်ပြည့်နှက်နေသောအခြေအနေတွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးယိုစိမ့်မှုအတွက်အအေးပေးစနစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
2. အမဲဆီ (ထောပတ်) ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ရှိရာ, အမဲဆီလုံးဝဖြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
၃။ crawler ၏အတွင်းပိုင်းရှိအညစ်အကြေးနှင့်အမှိုက်များကိုတတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းရမည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်တွင် crawler ၏တင်းမာမှုကိုလေ့လာပြီးလမ်းလျှောက်ယန္တရား၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်စံနှုန်းအရအမဲဆီထည့်ပါ။
(၂) ။ တူးဖော်ရာတွင်အသုံးပြုရန်နေရာများ
၁။ တူးဖော်ခြင်းကိုစတင်ပြီးနောက်အင်ဂျင်ကိုအမြန်နှုန်းနှေးကွေးစေပြီးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရပါ (အချိန်ကာလသည်အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်) နှင့်အင်ဂျင်အပူချိန်ကောင်းမွန်စွာမြှင့်တူးဖော်ခြင်းမပြုမီစောင့်ဆိုင်းပါ။ ။
2. တူးဖော်ခြင်းမပြုမီ, တူးဖော်၏စံလုပ်ရပ်များအားလုံးပုံမှန်မဟုတ်သောဆူညံသံနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္forာန်ကိုစစ်ဆေးရန်ဝန်မပါဘဲလည်ပတ်သင့်သည်။
၄။ တူးဖော်နေသည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သောအခါ ၄ င်းသည်စနစ်တစ်ခုစီကိုစစ်ဆေးသင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းချောဆီလိုသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာရန်နှင့်အမဲဆီထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ က 5-6 နာရီ) စစ်ဆေးနှင့်ထည့်သွင်းရန်အကြံပြုသည်။
၅။ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားခြင်း (ရွှံ့နွံ၊ ပေါင်းပင်များ၊ ရွှံ့စေးစသည်တို့) တွင်အမှိုက်များကိုအချိန်မီရှင်းလင်းရမည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အထူးသဖြင့်အင်ဂျင်သည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်၏ပုံမှန်အပူဖြန်သေချာစေရန်အင်ဂျင်ပတ်လည်အပျက်အစီးများ။